LAB'AIRE कुकुर प्रजनन जानकारी र चित्रहरू - कुकुरहरु
Lab'Aire कुकुर प्रजनन जानकारी र चित्रहरू
एरिडेल टेरियर / लैब्राडोर रिट्रीभर मिश्रित ब्रीड कुकुरहरू
'यो जेम्सन हो र ऊ years बर्षको छ। हामीले उहाँलाई एउटा पपीको रूपमा अपनायौं र उनीहरूले भने कि उनी जर्जियाबाट उद्धार गरिएको थियो। ऊ सबैभन्दा मायालु कुकुर हो मैले कहिल्यै पनि गरेको थिएन, र केवल सधैं कृपया खुशी पार्नु हो। उहाँसँग उत्तम आचरण छ र अत्यन्त चलाख छ। ऊaमा दोस्रो स्थानमा आए चाल प्रतियोगिता । उसको ठूला चालहरू क्र cra्गल भइरहेका छन्, मृत खेलिरहेका छन् र आफ्नो दिनचर्याको अन्त्यमा एउटा धनुष लिइरहेका छन्। उहाँ खास गरी हाम्रो पोखरीमा पौडी खेल्न रुचाउनुहुन्छ र हाम्रो छोरा डिक्लान (years बर्षको उमेर) सँग खेल्न मन पराउनुहुन्छ। हामी समुद्री किनारबाट जर्सी किनारमा बस्छौं र उहाँ बालुवामा दौडन र छालहरूमा उफ्रिने प्रेम गर्नुहुन्छ। म चाहन्छु कि कोहीले यस प्रकारको कुकुरलाई प्रजनन गर्न थाल्छ- उनीहरूले लेबरडेलहरू बोलाउन सक्छन्। सबै भन्दा राम्रो कुकुर! '
Lab'Aire एक शुद्ध कुकुर होईन। यो बीचको क्रस हो एरिडेल टेरियर र लैब्राडोर पुनःप्राप्ति । मिश्रित जातको स्वभाव निर्धारण गर्न उत्तम तरिका भनेको क्रसमा सबै नस्लहरू हेर्नु र तपाईंलाई कुनै पनि नस्लमा फेला परेका कुनै पनि सुविधाहरूको कुनै संयोजन प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जान्नु हो। यी सबै डिजाइनर हाइब्रिड कुकुरहरू उत्पादन गरिंदैन 50०% शुद्ध प्रजननको 50०% शुद्ध प्रजनन हुन्। यो प्रजनकका लागि प्रजननको लागि धेरै सामान्य छ बहु-पुस्ता पार ।
बुलडग जर्मन गोठालोसँग मिसियो
जेम्सन एरिडेल टेरियर / लैब्राडोर रिट्रीभर एक कुक्राको बच्चाको रूपमा
Oliver the Lab'Aire (Labrador retriever / Airedale Terrier मिश्रण)9बर्षको उमेरमा
'ओलिभर एक कालो ल्याब्राडोर क्रस एरिडेल टेरियर हो, यहाँ years बर्षको उमेरमा देखाइएको छ। उसले सबैलाई प्रेम गर्दछ। गम्भीरतापूर्वक। सबैजना मैले कहिले पनि खुशीको कुकुरलाई चिनेको छैन। के तपाई साथीलाई चाहानुहुन्छ? ऊ खुसी हो तपाईले उसलाई ध्यान दिएर। मध्यम आकारको लेब्राडोर / एरिडेल मिक्सल मु mix्गल, यदि तपाईंले खाना पाउनुभयो भने, उहाँ तपाईंको सबैभन्दा मिल्ने साथी बन्नुहुनेछ र तपाईंको ध्यान उसको अविभाजित हुनेछ। उसले खेल्न मन पराउँदछ र दिनभर बिना कुनै कारण चलाउछ, केवल शुद्ध र साधारण तथ्यको लागि कि उसलाई दौड्न मन पर्छ। ऊ पोखरीहरू पूजा गर्छ। यदि त्यहाँ पोडल छ भने, ऊ सोझो टाउकोमा जान्छ र यसलाई मात्र दगुर्छ। यदि यो विशेष गरी ठूलो पोखर छ भने, उहाँ तिनीहरूमा सुत्न रुचाउनुहुन्छ। जे होस्, ऊ पौडी खेल्ने बेला उसको गहिराइबाट बाहिर जान मनपर्दैन - ऊ किनारमा मात्र प्याडल राख्छ। ओलिभर जो कोहीसँग खेल्नेछ, ठूला कुकुर, साना कुकुर, घोडा, पुतली। जहाँसम्म इलाकामा एउटा बिरालो छ ... वा एउटा गिलहरी ... वा खरायो ... वा कुनै अन्य मुर्खा हो कि निष्पक्ष खेल हो भने ऊ मानसिक रूपमै जान्छ। ऊ अलि मोटो छ कि चाँडै सबै कपास गर्दैन। र दुई पटक दोहोर्याइएको छ - एउटा सिटि—मा (एक कारले ठक्कर दिएको, सडकको अर्को पट्टि घुमाएर फेरि हिर्कायो) यसको लागि देखाउनको लागि सानो स्क्र्याच बाहेक केही छैन ... ऊ रबरको बनेको छ। ढोकासँग खेल्ने आफ्नै मूर्खताको कारण उसले आफ्नो पुच्छिको एक इन्च गुमाएको छ ... ऊ यस्तो मायालु पशु हो। '
'यो हाम्रो कुकुर क्रिस्पी हो। ऊ एक अद्भुत कुकुर थियो, तर अब बितिसकेको छ। उनकी आमा एक शुद्ध प्रजनित लैब्राडोर रिट्रीइभर थियो र उनको बुबा एक शुद्ध नस्ल एरिडेल टेरियर थियो। त्यस समयमा हामीलाई थाहा थिएन त्यहाँ Lab'Aire जस्तो चीज छ। ऊ एक अद्भुत कुकुर थियो र नक्कली एरिडेल टेरियर जस्तो देखिन्थ्यो। उसको कपालका सबै र colors्गहरू थिए र ठूला जोकर थिए। '
क्रिस्पी लब'अयर (लैब्राडोर रिट्रिभर / एरिडेल रिट्रीभर मिक्स)
एरिडेल टेरियर / लाब्राडोर रिट्रीभर मिश्रण टकर गर्नुहोस् years बर्षको उमेरमा
महान pyrenees एनाटोलियन गोठालो पपीहरू
बेट्टी बुप Lab'Aire (एरिडेल टेरियर / लैब्राडोर रेट्रिभर मिक्स)
बेट्टी बुप र पार्कर पपीजको रूपमा (Lab’Aire - एरिडेल टेरियर / लैब्राडोर रिट्रीभर मिक्स)
brindle shar pei pitbull मिक्स
Lab'Aire को अधिक उदाहरणहरु हेर्नुहोस्
Lab'Aire चित्रहरु १
एरिडेल टेरियर मिक्स ब्रीड कुकुरहरूको सूची
Months महिना पुरानो सुनौलो रिट्रिभर
ज्याक रसल बोस्टन टेरियर मिक्स
चकलेट प्रयोगशाला shar pei मिक्स
पूर्ण हुर्किएको शिह tzus को चित्रहरु
पोउडलको साथ बोर्डर क्लोसी मिसियो
१ बर्ष पुरानो लाब्राडोर पुनःप्राप्ति